Taratasin'ny Eveka ho an'ny mpitondra 4 mirahalahy ao amin'ny FFKM - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aminareo Efatra mirahalahy Filoha FFKM,
Antony : Taratasy Fangataham-panazavana
Homba anareo lalandava anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanan'ny Tompo !
Mamerina manoratra aminareo indray izahay, amin'ny anaran'ny CEM ary ny ECAR, satria misy zavatra sasany miteraka ahiahy ka ilàna fanazavana.
Araka ny Fitsipika anatin’ny Fivondronam-ben’ny Evekan’i Madagasikara (CEM) dia hanao ny Fihaonambeny ny 5 hatramin’ny 14 mey 2015 ny CEM, ka anisan’ny tafiditra amin’ny fandaharam-potoana ny dinika momba ny Raharaham-pirenena, indrindra ny resaka Fampihavanam-pirenena.
Eo anatrehan’izany indrindra dia maro ny zavatra mahalasa eritreritra satria toa mifangaro be loatra:
1- Eo amin’ny fampihavanana atao dia toa resaka politika no misongadina matetika. Izao tokoa ve ny fotoana ampidirana ny raharaha politika ary anjaran’ny FFKM ve ny mandinika izany ? Nahoana moa raha atao fanta-bahoaka tsara ireo Tanjona Fampihavanana imasoan'ny FFKM ? Marina efa mazava ny 4 F nefa iza marina no ampihavanina ?
2- Mitovy ve ny isan’ireo solontenan’ny Fiangonana tsirairay manatrika izao fihaonambe izao ? Misy fepetra ve mikasika azy io ? Raha misy tsara lazaina mazava ho fantatry ny rehetra ?
3- Tsara ny fandraisana antanana nefa tampoka loatra ny resaka 200 000 Ar ka sarotra ny ahitana azy eo no eo amin’izao maitso ahitra izao fa indrindra ho an’ny tantsaha. Izy ireo anefa ny vahoaka maro an’isa ary tena tompon’ny fampihavanana.
Dia misaotra sy mankasitraka anareo izahay ary mampanantena vavaka lalandava. Trotrointsika ambavaka lalandava ity firenena malalantsika ity.
Amin'ny anaran'ny CEM /ECAR Madagasikara,
Natao androany 21 Avril 2015.
Mgr TSARAHAZANA Désiré, Filohan'ny CEM
Mgr RAMAROSON Benjamin, Filohalefitrin’ny CEM
Mgr RANAIVOMANANA Philippe, Sekretera Jeneralin’ny CEM